Goobta Guddiga Farsamada laga dejinayo Magaalada Baydhabo (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Goobta Guddiga Farsamada laga dejinayo Magaalada Baydhabo (SAWIRRO)
Goobta Guddiga Farsamada laga dejinayo Magaalada Baydhabo (SAWIRRO)
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa Guddiga Farsamada ee ka socda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ugu talagalay inay Magaalada Baydhabo ka deggaan Ruun Jinaad Hotel, oo Sabtidii xariga laga jaray.
Hotelkan ayaa laga barbar dhisay Xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Baydhabo, iyadoona laga hirgeliyay goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) oo xariga ka jaray hotelkan ayaa sheegay in uu noqon doono meesha ugu horeyso ay deggayaan Guddiga Farsamada.
“Waxaa nagu soo fool leh Guddigii Farsamada ee xal u helidda doorashooyinka ee Baydhabo ku shirayay, meesha ugu horeyso ay deggayeen ayay noqon doontaa.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Hotelkan ayaa waxaa Magaalada Baydhabo ka furtay haweeneyda lagu magacaabo Bishaaro Cali Nuur (Bishaaro Gaabey), oo ah marwada u dhaxda Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Ibraahim (Geesey), oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya.
Dhanka kale Guddiga Farsamada oo afar iyo toban xubnood ka kooban ayaa waxaa min laba xubnood soo kala magacaabay Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir, kuwaa oo magacaabidooda lagu shaaciyay Warsaxaafadeed maanta laga soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble.
Guddiga ayaa Magaalada Baydhabo ku yeelanaya shir ay uga arrinsanayaan doodda ka dhalatay halka lagu qabanayo shirkii uu 15-kii bishan ku baaqay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Doodda ayaa timid, ka dib markii Puntland ka hortimid in shirka lagu qabto Magaalada Garoowe, halkaasoo ah goobtii uu iclaamiyay Madaxweynuhu.
Sida uu qorshuhu ahaa maanta ayaa lagu waday in xubnahan uu shirka uga furmo Magaalada Baydhabo, balse uu kaga dib dhacay arrimo farsamo awgood.
Si kastaba ha-ahaatee waxaa muuqata in uu fashil ku yimid shirkii uu 15-kii bishan Madaxweyne Farmaajo isugu yeeray Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir. Shirkan oo mid wadatashi ah ayuu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro khilaafka ku gadaaman hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka dalka.
Villa Somalia ayaa lagu wadaa inay dib ka soo muddeyso goorta la qabanayo shirka wadatashiga, marka is afgarad laga gaaro halka ay tahay in lagu qabto.
Previous articlePuntland oo qabatay xubno loo haysto Shabaabnimo (SAWIRRO)
Next articleDad hor leh oo COVID-19 ugu geeriyooday gudaha dalka